अमेरिका मूल्य के? | शरणार्थी र आप्रवासी लागि जानकारी | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
अमेरिकी मान के हुन्? के अमेरिका महत्त्वपूर्ण छ?
अमेरिकी मान बुझ्न र अमेरिका महत्त्वपूर्ण छ के सिक्न. Read why Americans value independence, समानता, and being on time. You will see why Americans are direct and informal and why competition, work ethic, and buying things are all important in the USA.
तिम्रो देशमा, तपाईं शायद तपाईं मूल्यवान कि बलियो परम्परा र संस्कृति थियो. अमेरिका मा, त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण अमेरिकी मानहरू. यी अमेरिकी गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा हो.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा मुख्य एक मान स्वतन्त्रता छ. स्वतन्त्रता कहिलेकाहीं individualism रूपमा उल्लेख गरिएको छ. अमेरिकी आत्म-भरोसा गर्न वाला हुनुको धेरै गर्व, वा आफूलाई हेरचाह गर्न सक्षम रहेको, र तिनीहरूले सोच्न अरूलाई साथै आत्म-भरोसा गर्न वाला हुनुपर्छ गर्छन. कसैले गर्दा लक्ष्य पुग्छ, कि सामान्यतया उनको आफ्नै मेहनत को परिणाम रूपमा देखेको छ. यो थप सामूहिक छन् जो धेरै अन्य संस्कृति भन्दा फरक छ. सामूहिक संस्कृति सम्पूर्ण परिवार वा समुदायमा एक प्रतिबिम्ब रूपमा उपलब्धिहरूलाई हेर्न गर्छन.
यहाँ अमेरिका मूल्य कसरी स्वतन्त्रता एउटा उदाहरण हो:
अमेरिकी बच्चाहरु अन्य संस्कृति भन्दा घर पहिले छोड्न गर्छन. जस्तै, उच्च विद्यालय स्नातक पछि, धेरै छोराछोरी कलेज जाने वा काम सुरु गर्न बाहिर सार्न. तिनीहरूले घरमा बस्न जारी यदि, तिनीहरूले भाडामा तिर्न वा घर योगदान गर्न आग्रह हुन सक्छ.
अमेरिका काम गर्न सक्षम छ जो कोहीले आफूलाई समर्थन गर्न त्यसो गर्न आशा.
अमेरिका मूल्य गोपनीयता र आफ्नै ठाउँ. गोपनीयता चाहने केही संस्कृति मा खराब कुरा रूपमा देख्न सक्छ, धेरै अमेरिकी एक्लै समय छ मनपर्छ र केही विषयहरू बारे निजी हुन सक्छ.
यहाँ गोपनीयता को अमेरिकी मूल्य सम्बन्धित केही परिस्थिति हुन्छन्:
कुराकानीहरू, धेरै अमेरिकी निश्चित कुराहरू बारे निजी हुन् र तिनीहरूलाई बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनन्, यस्तो आफ्नो उमेर रूपमा, कति पैसा तिनीहरूले बनाउन, आफ्नो राजनीतिक वा, यौन र धार्मिक दृष्टिकोण. तिनीहरूले चिन्तित यसलाई तर्क गर्न कारण हुनेछ किनभने केही मानिसहरू सार्वजनिक यी विषयहरू कुरा रुचि छैन. तर, तपाईंले यी विषयहरूको बारेमा प्रश्न छ भने, तपाईं हामीलाई प्रश्न गर्न सक्छन्. सबैभन्दा अमेरिका अमेरिका संसारको हेर्न कसरी बारेमा सिकाउन खुसी हुनेछन्.
अमेरिकी अक्सर अन्य संस्कृतिका मानिसहरू भन्दा सार्वजनिक परिस्थितिमा प्रत्येक अन्य थप स्थान दिन. तिनीहरूले बीच स्पेस एक बिट संग खडा गर्छन, एक outstretched हात को सामान्यतया दूरी.
धेरै अमेरिकी तिनीहरूले गोपनीयता सुनिश्चित गर्न आफ्नो घरहरू वरिपरि बाड छ. छोराछोरीलाई छिमेकीको बार माथि बल वा अन्य खेलौना गुमाउन भने, यसलाई साधारण को बार मा कूद र खेलौना प्राप्त गर्न खराब विचार छ. सट्टा, अगाडि ढोका जानुहोस् र दस्तक वा घण्टी बज्दैन. यदि छ कुनै जवाफ ढोका टिप्पणी छोड्न, 8am र 8pm बीच खेलौना प्राप्त गर्न अनुमति सोधेर गर्न. यो आदर र सुरक्षित दुवै छ, केही मानिसहरू गार्ड कुकुर छ वा तिनीहरूको गोपनीयता अत्यन्तै सुरक्षा हुन सक्छ रूपमा. विशेष एल्डरहरूले सामान्यतया थप शान्ति र शान्त आवश्यक र विचलित हुन चाहँदैनन् सक्छ. तपाईं एक गेट खोल्न यदि तपाईं यसलाई बन्द गर्नु पर्छ. तर, यदि तपाईं खुला गेट आउन, यसलाई छोड्न खुला.
बेडरूम प्रायः निजी रिक्त स्थान मानिन्छ. छिमेकी र मित्र भान्सा मा मनोरंजन छन्, भोजन कक्ष वा जीवित कोठा. आमाबाबु र छोराछोरी आफ्नै बेडरूम छ गर्छन, र अक्सर, प्रत्येक आफ्नै बेडरूम छ अमेरिकी बच्चाहरु.
ती केही आफ्नो संस्कृति मा फरक हुन सक्छ कि गोपनीयता को उदाहरण हुन्.
अमेरिकी अक्सर धेरै प्रत्यक्ष छन्. यो अक्सर तिनीहरूले के लाग्छ तपाईंलाई बताउन र तिनीहरूले चाहनुहुन्छ के दाबी हुनेछ अर्थ. भइरहेको दाबी साधारण अमेरिका मा एक राम्रो कुरा रूपमा देखिन्छ.
यहाँ अमेरिकी-शैली directness केही उदाहरण हुन्:
केही संस्कृति मा, उदाहरणका लागि - यो निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न अशिष्ट छ, कसैले भोजन लागि सोध्छन् यदि, तपाईं हो भन्न सक्छ, तर त्यसपछि खाजा जाने छैन. अमेरिकामा, यो लगभग भन्न सधैं राम्रो छ, “कुनै, तर धन्यवाद” वा, “धन्यवाद, तर म अर्को प्रतिबद्धता छ।” तपाईं निमन्त्रणा गर्न हो भन्न तर घटना जाने छैन भने, व्यक्ति उदास प्राप्त हुन सक्छ.
कुराकानीमा, एक अमेरिकी तपाईंको धारणा असहमत यदि, तिनीहरूले तपाईंलाई बताउन सक्छ. यो तिनीहरूले तपाईंलाई रुचि छैन होइन, तिनीहरूले फरक विचार हुन सक्छ भर्खरै.
को विचार “अनुहार गुमेको” छैन अमेरिका मा नै छ. लागि अनुवाद “अनुहार गुमेको” हुनेछ “लज्जित,” जुन कम गम्भीर छ. तिनीहरूले आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ भने अमेरिका लज्जित वा गल्ती बनाउन सक्छ, जस्तै. त्यसैले अमेरिकी गल्ती दर्शाउन वा तपाईं आलोचना सक्छ, बस यो एक सुधार वा उपयोगी जानकारी इरादा.
मा कक्षाहरू, अमेरिका आफ्नो शिक्षकहरू चुनौती हुन सक्छ’ विचार. केही संस्कृति मा, यसलाई आफ्नो शिक्षक संग असहमत गर्न अभद्र छ.
यसलाई कहिल्यै मदत माग्न गर्न अशिष्ट छ. मित्र वा छिमेकीको तपाईं सोध्नुहुन्छ भने तपाईं केहि चाहिएमा, तिनीहरूले साँच्चै मदत गर्न चाहनुहुन्छ. भन्न स्वतन्त्र महसुस, “तपाईं पसलमा जाँदै हुनुहुन्छ भने र सुन्ताला तपाईंलाई हिंड्न, कृपया मलाई एक झोला छनोट, र म तिनीहरूलाई लागि भुक्तानी छौँ।” वा, यदि तपाईं उदाहरणका लागि जाडो लुगा आवश्यक, र तपाईं तिनीहरूलाई जहाँ किन्न निश्चित हुनुहुन्न, यो सोध्न ठीक छ, “तपाईं कहाँ म मेरो बच्चाहरु को लागि सस्ती कोट र जूता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ लागि कुनै पनि सुझाव छ गर्छन्?” सबैभन्दा अमेरिकी सहयोग गर्न प्रेम, र असल मित्र र छिमेकी बन्न धेरै सानो प्रोत्साहन आवश्यक.
सामन्यतया, यो तरिका इरादा छैन के अशिष्ट देखा पर्न सक्छ कि सम्झना राम्रो छ. अमेरिकी अशिष्ट हुन प्रयास छैन - तिनीहरूले केवल प्रत्यक्ष भइरहेका छन्.
स्वतन्त्रता को अमेरिकी घोषणापत्र घोषणा, “सबै पुरुष बराबर सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ।” वास्तविकता मा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा केही मानिसहरू सधैं उत्तिकै सबै नागरिक व्यवहार गर्छन्, तर धेरै अमेरिकी को बारेमा धेरै कडा महसुस विचार समानता को. अमेरिकी इतिहासमा धेरै उदाहरणहरू सबै मानिसहरू अफ्रिकी अमेरिकी को दासत्व रूपमा उत्तिकै यस्तो उपचार थिए जहाँ छैन वहाँ (कालो) नागरिक. तर, अमेरिका सबै मानिसहरू बराबर अवसर हुनुपर्छ भन्ने विचार विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ. यो विचार भनिन्छ के को एक भाग छ “अमेरिकी सपना।” थुप्रै प्रारम्भिक आप्रवासी अमेरिकी सपना पछ्याउन अमेरिका सारियो. तिनीहरूले तपाईंलाई गाह्रो काम भने कि विश्वास, तपाईं समाज मा सार्न सक्छ.
आज थप र थप मान्छे अमेरिकी सपना साँचो छैन महसुस. धेरै गाह्रो काम गर्ने धेरै मानिसहरू धेरै पैसा छैन. अक्सर सुअवसर पृष्ठभूमिका आउन मानिसहरू एक सजिलो समय दुनिया मा सार्ने छ. अझै पनि, समानता को विचार अमेरिकी संस्कृति को एक महत्वपूर्ण भाग हो.
यहाँ अमेरिकी संस्कृति मा समानता केही उदाहरण हुन्:
• कानुनी अवस्थामा, सबै अमेरिका उत्तिकै उपचार गर्नुपर्छ र सबै अमेरिका एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व गर्न एक अधिकार छ.
• एक कक्षाकोठामा, सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो शिक्षकहरू द्वारा उत्तिकै उपचार गर्नुपर्छ. कुनै विद्यार्थी इष्ट गर्नुपर्छ.
• पुरुष र महिला उत्तिकै उपचार गर्नुपर्छ, र मानिसहरू महिलाहरु भन्दा राम्रो रूपमा हेरिएको छैन. वास्तविकता मा, धेरै महिलाहरु अझै पनि अमेरिकी समाजमा मानिसहरू जस्तै स्थिति छैन, विशेष गरी तिनीहरूले गर्न सक्छन् कति पैसा को मामला मा.
• अमेरिकामा, त्यहाँ एक कडा सम्मिलित सामाजिक वर्गीकरणका वा जाति सिस्टम छैन. कहिलेकाहीं तपाईं आदर तपाईं व्यवहार आशा सक्छ मानिसहरू एक बराबर रूपमा व्यवहार गर्न सक्छ. जस्तै, छोराछोरीले नाम द्वारा पुरानो वयस्क कल हुन सक्छ. यदि यो तपाईं हुन्छ, तिनीहरूले अशिष्ट हुनुको छैन याद गर्न प्रयास, तर तिनीहरू फरक सांस्कृतिक मूल्य छ.
• कहिलेकाहीं अमेरिकी तिनीहरू परिचय गर्दा तिनीहरूले सम्बोधन गर्न रुचि कसरी तपाईं भन्नेछु. शिक्षक वा एक डाक्टर आफु रूपमा परिचय भने “लुसी” वा “डाक्टर लुसी”, कि तिमी उसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कस्तो छ. त्यो आफु डा रूपमा परिचय भने. विल्सन, कि त्यो भनिन्छ गर्न रुचि के छ.
यसलाई त्यहाँ अझै पनि मान्छे बीच अदृश्य वर्गीकरणको हुन सक्छ भनेर थाह उपयोगी छ. यी व्यक्तिगत सफलता थप आधारित हुन गर्छन: जस्तै, कसैको काम, धन, वा शिक्षा.
अमेरिकी संस्कृति अनौपचारिक छ. अमेरिकी अक्सर चर्च जिन्स पनि लगाउने. Amancay Maahs द्वारा फोटो.
अमेरिकी समाज अक्सर अनौपचारिक र तनावमुक्त छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका एक अनौपचारिक संस्कृति छ कसरी यहाँ केही उदाहरण हुन्:
• अमेरिका casually पोशाक सक्छ, यस्तो पनि काममा जीन्स वा छोटकरीमा लगाएका रूपमा, विद्यालय, वा चर्च. जब तपाईं पहिले काम सुरु, यो एक राम्रो विचार आफ्नो पोशाक तपाईं वरिपरि मानिसहरू लगाएका छन् के आधारित चयन गर्न थप औपचारिक पोशाक र त्यसपछि छ.
• जब अभिवादन कसैले, अमेरिकी भन्न गर्छन, “नमस्ते” वा, “नमस्कार।” तपाईं कुनै कुरा तपाईं कुरा गर्दै गर्ने नै अभिवादन प्रयोग: आफ्नो छोरा वा आफ्नो छोराको शिक्षक. को langauge अभिवादन को औपचारिक र अनौपचारिक प्रकारका छैन.
• अमेरिका आफ्नो पहिलो नाम द्वारा प्रत्येक अन्य कल गर्छन. केही परिस्थितिमा, तथापि, उदाहरणका लागि - यो थप औपचारिक हुन र अन्तिम नाम तपाईं पहिलो नाम प्रयोग गर्न आग्रह नभएसम्म प्रयोग गर्न राम्रो छ, व्यवसाय अवस्थामा वा स्कूलमा.
अमेरिकी संस्कृति को अनौपचारिकता तपाईं चकित सक्छ, यो अशिष्ट हुन गर्न चाहनुभएको छैन. वास्तबमा, कसैले तपाईंलाई informally greets र आफ्नो नाम तपाईं कल भने, यो शायद तिनीहरूले एउटा अनुकूल तरिकामा तपाईं को विचार मतलब.
अमेरिकी प्रतिस्पर्धी हुन र अक्सर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन काम गर्न सक्छन्. प्रतियोगिता अक्सर अमेरिकी व्यस्त हुन जान्छ. धेरै अमेरिकी हेर्न प्रतियोगिता राम्रो कुरा हो.
यहाँ प्रतिस्पर्धा को अमेरिकी मूल्य केही उदाहरण हुन्:
• व्यापार मा प्रतियोगिता को पूंजीपति अर्थव्यवस्था ठूलो भाग कारण छ. अमेरिकाको व्यापार मोडेल ग्राहकहरु लागि र सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरु लागि प्रतिस्पर्धा छ.
• अमेरिका गतिविधिहरु धेरै तालिका हुनेछ. पनि जवान छोराछोरी स्कूल बाहिर गतिविधिहरु धेरै भाग, यस्तो खेल रूपमा, संगीत पाठ, र स्वयं. कहिलेकाहीं तपाईं अमेरिका छन् जस्तै महसुस हुन सक्छ “वरिपरि भागने” आराम लागि सानो समय संग. तर तिनीहरूले गरेका धेरै प्राप्त गर्दा धेरै अमेरिकी तिनीहरूले राम्रो महसुस.
• प्रतियोगिता स्कूल मा देख्न सकिन्छ, कार्यस्थल मा, खेल र. जस्तै, विद्यार्थी सबै भन्दा राम्रो ग्रेड हासिल गर्न कठिन काम गर्न सक्छन्. कहिलेकाहीं प्रतियोगिता समावेश समूह, यस्तो फुटबल टोली वा स्कूल अध्ययन समूहको रूपमा.
• अमेरिका पनि सक्छन् “प्रतिस्पर्धा” आफूलाई साथ. धेरै अमेरिकी तिनीहरूले के मा सुधार राख्न कडा परिश्रम. जस्तै, तिनीहरूले छिटो एक जाति चलाउन भन्दा तिनीहरूले पछिल्लो समय गरे सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूले भन्दा तिनीहरूले अघि वर्ष गरे आफ्नो काम मा थप वस्तुहरू बेच्न चाहेको हुन सक्छ.
कुल मिलाएर, प्रतियोगिता राखिएको मान तपाईंले केही संस्कृति आघात महसुस गर्न सक्छ, तपाईं प्रतिस्पर्धी भन्दा बढी सहयोगी छ कि एक संस्कृति आए, विशेष गरी यदि.
समय र दक्षता
अमेरिका आफ्नो समय मा मूल्य धेरै ठाँउ. तिनीहरूले लाग्छ भने कसैले वा केही आफ्नो समय बर्बाद छ अमेरिका निराश महसुस हुन सक्छ. केही अमेरिकी ध्यानपूर्वक आफ्नो समय योजना, दैनिक पात्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र आफ्नो काम जीवन दुवै लागि प्रयोग. त्यहाँ अमेरिका मा एक कहावत छ: समय नै पैसा हो. यो धेरै अमेरिकी आफ्नो समय प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अर्थ “कुशलतापूर्वक” - तिनीहरूले प्राप्त सबैभन्दा समय छोटो रकममा गरेको चाहनुहुन्छ.
यो प्रयोग गरिन्छ के फरक हुन सक्छ. जब एक व्यापार सम्झौता बनाउने, तपाईं अन्य व्यक्ति चिन्न समय खर्च हुन सक्छ, शायद चिया वा कफी पिउने गर्दा. अमेरिका मा, यो अक्सर छैन मामला छ.
यहाँ समय सजग हुन चाहनुहुन्छ सक्छ जो केही परिस्थिति हुन्छन्:
बैठक, विशेष गरी काम लागि: तपाईं समय प्रयास गर्नुपर्छ – शायद पनि5मिनेट प्रारम्भिक.
भेटघाट: तपाईं चिकित्सकको नियुक्ति वा नियुक्ति केही अन्य प्रकारको छ भने, तपाईँलाई समय पुग्नु आवश्यक. तपाईंले अझै पनि नियुक्तिका लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छ. तर, यो तपाईं समयमा छौं वा तपाईंलाई नियुक्ति पुनः कार्यसूची बनाउनु गर्न सक्छ महत्त्वपूर्ण छ.
साथीहरूसँग गतिविधिहरु: तपाईं खाने को लागि कसैको घरमा निमन्त्रणा छ भने, समय हुन प्रयास – तिमी हुन सक्छ5वा 10 मिनेट लेट, तर तपाईं त्यो भन्दा धेरै पछि छन् भने, तपाईं शायद कल र तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन.
दलहरू: एउटा सानो पार्टीको लागि, भित्र पुग्नु 15 समय को मिनेट दिइएको. धेरै मानिसहरूलाई एक ठूलो पार्टीको लागि, तिमी हुन सक्छ 30 गर्न 40 मिनेट लेट.
एउटा राम्रो नियम कुनै पनि बेला तपाईं लेट हुन जाँदैछन् छ, कल र बैठक भएको व्यक्ति थाहा तपाईं लेट हुनेछ दिनुपर्छ. यदि तपाईं कल गर्न सक्दैन, तपाईं व्यक्ति बताऊँ तपाईं आइपुग्दा तपाईं लेट भएकोमा खेद.
कहिलेकाहीं, कसैले धेरै चाँडै छोडेर छ वा छोड्ने हतारमा छ जस्तै तपाईं महसुस हुन सक्छ. तिनीहरूले हुन चाहनुहुन्छ किनभने यो हुन सक्छ “समयमा” आफ्नो अर्को नियुक्तिका लागि. तिनीहरूले तपाईंलाई रुचि छैन होइन.
समय रहेको र समय थाह हुनुको तपाईं शायद तपाईं लेट कारण भने अनुकूल गर्न आवश्यक हुनेछ एक सांस्कृतिक भिन्नता छ, तपाईं आफ्नो काम गुमाउनु सक्छ, तपाईंको भेटघाट सम्झना, वा कसैको भावना चोट. तपाईं एक कठिन समय छ भने समय अमेरिकी अर्थमा गर्न समायोजन, तपाईं समय को स्मरण गराउन एक अलार्म छ कि एक हेर्ने वा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी काम गर्न प्राप्त.
अमेरिका धेरै आफ्नो काम केन्द्रित गर्न सकिन्छ. कहिलेकाहीं अन्य संस्कृतिका मानिसहरू अमेरिका लाग्छ “बाँच्न-को काम” वा छन् “workaholics।” यो तिनीहरूले अमेरिका धेरै काम लाग्छ अर्थ. किनभने व्यस्त र सक्रिय रहेको अक्सर राम्रो कुरा रूपमा देखिन्छ अमेरिका काम-उन्मुख छन् कारण को भाग हो. मान्छे पनि जब संग कडा पहिचान गर्छन. जस्तै, तपाईं पहिलो कसैलाई भेट्न जब, तिनीहरूले तपाईंलाई सोध्न पहिलो प्रश्न छ “तपाईं के गर्नुहुन्छ?” तिनीहरूले अर्थ, “काम कस्तो तपाईं के?”
परिवारको घर लिनुभएको हेरविचार मा काम गर्ने मानिसहरू वा महिला अक्सर आफूलाई कल “घर-निर्माता” र कुनै पनि अन्य धेरै यो पेशा आदर योग्य. कुनै पनि प्रकारको आवेदन भर्दा, यो लेख्न ठीक छ “घर-निर्माता” घर बाहिर एक तिर्ने काम छैन नगर्ने कसैले लागि पेशागत रूपमा.
संयुक्त राज्य अमेरिका एक नव आगन्तुक रूपमा, कुरा owning र खरीद केन्द्रित - तपाईं कहिलेकाहीं अमेरिका जस्तो भौतिकवादी विचार हुन सक्छ. यो कारण को भाग हो भनेर धेरै अमेरिकी मूल्य प्रतियोगिता र काम. किनभने अमेरिका मूल्य प्रतियोगिता, तिनीहरूले गर्न चाहनुहुन्छ “जारी राख” तिनीहरूलाई वरिपरि ती संग. यसको अर्थ, जस्तै, आफ्नो छिमेकीलाई नयाँ कार पायो भने, तपाईं पनि एक नयाँ कार चाहनुहुन्छ सक्छ. अमेरिका यो कल “को Joneses संग राखन।”
धेरै अमेरिकी मूल्य काम र बलियो काम ethic छ. धेरै अमेरिकी तिनीहरूले काममा सफल छन् देखाउन तरिका जस्ता टीवी वा जूता रूपमा सामाग्री वस्तुहरू हेर्न. अमेरिका आफ्नो मेहनत र प्रयासको लागि पुरस्कार रूपमा सामाग्री वस्तुहरू विचार हुन सक्छ.
अर्को कारण अमेरिकी हुन सक्छ वस्तु-उन्मुख छ किनभने धेरै अमेरिकी मूल्य नयापन र नवीनता. त्यसैले तिनीहरू काम गर्ने एक फोन छ भने पनि, यो नयाँ र रोमाञ्चक सुविधाहरू छ किनभने तिनीहरू नयाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं सम्मान गर्न तपाईं सरसम्पत्ति धेरै हुनुपर्छ महसुस छैन. तपाईं आराम जीवित बस वा तपाईं रुचि कुनै पनि तरिका महसुस गर्नुपर्छ, शायद emergencies लागि थप पैसा बचत, शिक्षा र अवकाश बरु अरूलाई प्रभावित वस्तुहरु मा खर्च भन्दा.
माथिको बयान सबै अमेरिकी मान generalizations छन्. Generalizations सधैं साँचो हो, तर कुरा अक्सर साँचो हो कि. को RCO को लक्ष्य एक अमेरिकी तपाईं बुझ्दैनन् तरिकामा अभिनय हुन सक्छ किन राम्रो बुझ्न मदत गर्न generalizations प्रदान गर्न छ. सम्झनु, न बाटो अन्य तरिका भन्दा राम्रो छ - केवल फरक.
स्कूल समाप्त र आफ्नो GED कमाउन®